Brief Bio Dassk ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် Bio Until 2009 ပါUpdate ၂၀၁၀ ကို NLD(LA)JB ကမွေးနေ့မတိုင်ခင် ဖြန့်ချီပါမယ်။ဗမာ့သွေးပေးပို့ပါသည်။
နှလုံးအားနည်းသူများ မကြည့်ပါရန်..ဒီဗီဒီယို ရုပ်သံကို ကြည့်ပြီး အင်မတန် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ တစ်မြေတည်းနေ တစ်ရေတည်းသောက်တဲ့ တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကို အချင်းချင်း စံနစ်ဆိုးတစ်ခုရဲ့ အောက်မှာ အသက်တွေ စတေးနေရတာပါ။ စံနစ်ဆိုးရဲ့ သားကောင်တွေ ဖြစ်နေရတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်သားအချင်းချင်း စည်းလုံးညီညွတ်စွာ အတူတူနေထိုင်နိုင်မယ့် ငြိမ်းချမ်းတဲ့ စစ်မှန်တဲ့ စံနစ်တစ်ခု အမြန်ဆုံး ပေါ်ထွန်းနိုင်အောင် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ဖို့ အချိန်ရောက်နေပါပြီ။ အမိမြန်မာပြည်ကြီး အမြန်ငြိမ်းချမ်းပါစေ။ပေးပို့လာတဲ့ ကိုသန်းဝင်းအား ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Posted by ဒီမိုဝေယံhttp://www.demowaiyan.co.cc/2010/06/knla-spdc.html
You are cordially invited to attend the Women's Freedom Vigil to commemorate the amount of time Nobel Peace Laureate & Honourary Canadian Citizen Aung San Suu Kyi has spent under house arrest and in custody since July 1989, to honor her 65th birthday and all human rights defenders. She is the world's only Nobel Lauraete under the dentention.What: Women’s Freedom Vigil,acommemoration of the women of Burma When: Thursday, June 17, 2010, 6:45 pm - 8:00 pm Where: Church of the Holy Trinity 10 Trinity Square, Toronto (next to Eaton's Center) Join award-winning author Karen Connelly and Ms. Khin Kyi,aformer Internally Displaced Person, in honouring Daw Aung San Suu Kyi and all women defenders of human rights
Taken by Maciej Teczaathttp://www.trekearth.com/gallery/Asia/Myanmar/South/Yangon/Yangon/photo1210595.htm
DASSK Summary only...
“ လက်တွေ့အသိတရားတစု ” အချိန်တွေကရွေ့လျား ----- ဘ၀တွေကယွင်းသွေကာ အတွေးအခေါ်ဗဟုသုတ တချို့ရ အနည်းငယ်ရင့်ကျက်လာခဲ့ပေမယ့် လိုချင်တဲ့ခရီးပန်းတိုင်ဆီကိုမရောက်သေးဘူ့း။ အများတကာနဲ့အတူသွားရမယ့်ခရီးမှာ ----- အဓိကနဲ့သာမညကိုမတွေ့းခွဲခြားမလုပ်ကိုင်တတ်သူတွေများနေလို့လား နိုင်ငံရေးသမား တော်လှန်ရေးသမားတွေမဟုတ်ကြပေမယ့် ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့အရေးဟာ ကိုယ့်အရေးပဲဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးကို ကိုယ်တိုင်တိုက်ပွဲဝင်တောင်းဆိုရမယ်ဆိုတာကို လူတိုင်းသာအနည်းနဲ့အများသိနားလည်ထားခဲ့ရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာအာဏာရှင်တွေ မရှိနိုင်တော့မှာသေချာတယ့်။ သာမန်အညတရတွေဖြစ်ကြပေမယ့် ----- လောကကောင်းကျိုးကို တတ်စွမ်းသမျှသယ်ပိုးကူကြရင်း အကြောက်တရားတွေကင်းဝေးကာ ကိုယ်ယုံကြည်တာတွေကို လွတ်လပ်စွာဖော်ထုတ်ပြောဆိုရေးသားနိုင်တဲ့ မျှတတဲ့ဒီမိုကရေစီလူ့ဘောင်သစ်ဆီရောက်အောင် ကိုယ်ပိုင်အသိတရားတွေနဲ့ လူတိုင်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတွေအတွက် ရဲစိတ်မွေးကာ တိုက်ပွဲဝင်သင့်တယ့်။ ဇာနည်မောင် Summary only...
မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ သူတို့မှာ နျူကလီးယား အရေး ကြိုးပမ်းချက်တွေ မရှိကြောင်း ငြင်းဆိုတာဟာ သူတို့ရဲ့ လုပ်ရပ်ကို ဖုံးကွယ်မှု သက်သက်ပဲ ဖြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံရေး အကဲခတ်တွေက ဝေဖန်သုံးသပ်ပါတယ်။ မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ နျူကလီးယား ဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက် ကြိုးပမ်းမှုတွေ အကြောင်းစုံကိုတော့ နိုင်ငံတကာ ရုပ်မြင်သံကြား တခုကနေ ထုတ်လွှင့်ပြသချက်တွေ၊ မြန်မာစစ်တပ် အရာရှိဟောင်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်တွေဟာ သက်သက် ၀ါဒဖြန့် လုပ်ကြံစွပ်စွဲမှုတွေသာ ဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်က ကြေညာထုတ်ပြန် ခဲ့ပါတယ်။ အပြည့်စုံကို မအေးသန္တာကျော်က တင်ပြထားပါတယ်။စနေနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာမှာ - မြန်မာနိုင်ငံသည် နျူကလီးယား လက်နက်ပိုင်ဆိုင်၍ စစ်အင်အားနိုင်ငံ ဖြစ်လာရန် ရည်ရွယ်ချက်မရှိ - ဆိုတဲ့ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ကြေညာချက်ဟာ သူ့ဘက်ကနေ ခိုင်မာတဲ့ သက်သေ အထောက်အထားနဲ့ ငြင်းဆိုခြင်း မဟုတ်ဘဲနဲ့ လူထုကို အာရုံပြောင်းဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ပြောဆိုမှု သက်သက်သာ ဖြစ်တယ်လို့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကွန်ယက်အဖွဲ့ရဲ့ သုတေသနမှူး ဦးဌေးအောင် က သုံးသပ်ပါတယ်။“စစ်အစိုးရက ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဗျာ။ သူတို့ ဒါ မုံလာဥ လုပ်တဲ့သဘောပါပဲ။ ဒီနေ့ DVB ကနေပြီးတော့ ထုတ်လွှင့်ပြသတဲ့ အချက်အလက်တွေက DVB က မပြခင်ကတည်းက ကျနော်တို့ လေ့လာတွေ့ရှိရတဲ့အချက်တွေနဲ့ တော်တော်ကြီးကို အနီးစပ်ဆုံး တူနေတာ တွေ့ရတယ်။ DVB ကရတဲ့အချက်တွေကတော့ တိကျတဲ့ အထောက်အထားတွေ ဖြစ်တာပေါ့။ နေပြည်တော်မှာ တည်ဆောက်နေတဲ့ မြေအောက်လှိုင်ခေါင်းတွေ အပါအ၀င်ပေါ့နော်။ သူတို့ရဲ့ FOC လို့ခေါ်တဲ့ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေ တည်ဆောက်တာတွေကို မပည လို့ခေါ်တဲ့ မြေပုံညွှန်းနဲ့တကွ အတိအကျ မြေပုံပေါ်မှာ ပင်အပ်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ ပြနိုင်တဲ့အဆင့်ထိကို အချက်အလက်တွေ ရထားတာကို ကျနော်တို့ တွေရတာရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီအချက်တွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စစ်အစိုးရရဲ့ လျှို့ဝှက်ဖုံးကွယ်လုပ်နေတဲ့ အချက်အလက်တွေ အကုန်လုံးဟာ လုံးဝ ပေါ်ပေါက်သွားတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။ ဒါကို ပိုပြီးတော့ သက်သေပြတာကတော့ ဗိုလ်မှူး စိုင်းသိန်းဝင်း တို့၊ ဗိုလ်မှူး အောင်လင်းထွဋ်တို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေက ပိုပြီးတော့ ဒါတွေကို အတည်ပြုပေးလိုက်တဲ့ သဘောမျိုး သက်ရောက်တာ တွေ့ရတာရှိတယ်လေ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ စစ်တပ်ထဲမှာ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တော်တော် ကြီးကြီးမားမား ကယက်ရိုက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် ကြေညာချက်တွေ ထုတ်ပြီးတော့ သူတို့က သူတို့ တပ်ထဲကို ပြန်ပြီးတော့ လိမ်ညာဖို့၊ ပြည်သူလူထုကို လိမ်ညာဖို့ အဲဒီလို လုပ်တယ်လို့ပဲ ကျနော် ထင်ပါတယ်။”မြန်မာနိုင်ငံကို အကာအကွယ်ပေးလေ့ရှိတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ကို နျူကလီးယား ဆိုင်ရာ နည်းပညာ သင်တန်းတွေ ပေးနေတဲ့ ရုရှားတို့ဟာလဲ မြန်မာစစ်အစိုးရက နျူကလီးယား လက်နက် ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ကြိုးစားတာကိုတော့ ထောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း သူက ဆိုပါတယ်။“ရုရှားတို့လို တရုတ်နိုင်ငံတို့လို နိုင်ငံကြီးတွေ အနေနဲ့ကတော့ မြန်မာစစ်အစိုးရကို သမာရိုးကျ လက်နက်တွေ ရောင်းတာမျိုးတော့ သူတို့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လို့ အနုမြူလက်နက်လို အားလုံးကို အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ လက်နက်မျိုးကိုတော့ ဒီနိုင်ငံကြီးတွေကလည်း ရောင်းချဖို့ သူတို့မှာ လက်တွန့်နေတာမျိုး၊ ရောင်းချချင်တဲ့ ဆန္ဒ မရှိဘူးလို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်။ နောက်တခုကလဲပဲ တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့က မြောက်ကိုရီးယားလို နိုင်ငံမျိုး၊ မြန်မာနိုင်ငံလိုပေါ့လေ စစ်အာဏာရှင်တွေ ကြီးစိုးတဲ့နိုင်ငံမျိုးတွေကို သူတို့က ကိုင်တွယ်ထားခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံတကာနဲ့၊ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ အလျော့အတင်း လုပ်တဲ့နေရာမှာ သူတို့က ကစားကွက်လုပ်တဲ့ နေရာမှာ ဒါတွေကို အသုံးချနေတယ်လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်။”မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ တကယ်လို့သာ သူတို့ ကြေညာချက်အတိုင်း နျူကလီးယား လက်နက် ပိုင်ဆိုင်တဲ့ စစ်အင်အားနိုင်ငံ ဖြစ်လာဖို့ ရည်ရွယ်ချက် မရှိပါဘူးဆိုရင် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းကို သက်သေပြသင့်တယ်လို့လည်း ဦးဌေးအောင်က သုံးသပ်ပါတယ်။“စစ်အစိုးရ အနေနဲ့ အခုလို နိုင်ငံတကာကနေ ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေ မမှန်ကန်ဘူးဆိုတာကို လက်တွေ့ သက်သေပြချင်တယ် ဆိုရင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့တွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခွင့် ပေးသင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အခု နေပြည်တော်နဲ့ အနီးတ၀ိုက်မှာ အခု စစ်အစိုးရ တည်ဆောက်နေတယ် ဆိုတဲ့ မြေအောက် အမိန့်ပေးဌာနချုပ်တွေ အပါအ၀င်ပေါ့လေ။ သူတို့ မြေအောက်မှာ ဆောက်နေတဲ့ လျှို့ဝှက်လက်နက် စက်ရုံတွေကို သွားရောက်ပြီးတော့ စစ်ဆေးခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် စစ်အစိုးရက အခုလိုတောင်မှပဲ ကြေညာချက်တွေ ထုတ်စရာ မလိုပါဘူး။ အားလုံးက နိုင်ငံတကာကလဲ သံသယရှင်းသွား နိုင်ပါတယ်လို့ ကျနော် ပြောချင်ပါတယ်။”ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကွန်ယက် (NDD) ရဲ့ သုတေသနမှူး ဦးဌေးအောင် ပြောသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နော်ဝေနိုင်ငံ အခြေစိုက် DVB ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံနဲ့ ကာတာ နိုင်ငံ အခြေစိုက် AlJazeera ရုပ်မြင်သံကြား ဌာနတို့က Myanmar’s Military Ambitions ဆိုတဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ နျူကလီးယား ဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းမှုတွေအကြောင်း သတင်းမှတ်တမ်းကို ဇွန်လအစောပိုင်းမှာ နိုင်ငံတကာကို ထုတ်လွှင့်ပြသ သွားခဲ့ပြီးနောက် အခုလို မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ တုံ့ပြန်ချက် ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။http://www1.voanews.com/burmese/news/burma/Burma_nuclear_ambitions_06-12-10-96215979.html
kindness of....docKindness of. Summary only...
ငါတို့၏ တိုက်ပွဲများမနက်ဖန် မုန်တိုင်းရဲ့ သင်င်္ချိုင်းပေါင်းများစွာမှာ ကဗ္မည်းမဲ့ အုတ်ဂူတွေထက် ရင်ခုန်သံကျိန်စာ မငြိမ်းလေသမျှ မှတ်တိုင်ပျောက် အမာရွတ်ပုံရိပ်တွေနဲ့ ဇွတ်တရွတ် လှလှပပ နိုင်းပြသတဲ့လား သွေးမုန်တိုင်း လှိုင်းတံပိုးတွေနဲ့ ငါတို့ရဲ့  တိုက်ပွဲများ မနက်ဖန် အတွက်လေ။။ အတ္တမဲ့တဲ့ လောကမှ မဟုတ်တာ တောင်ပံခတ် ကန္တာရဝေဟင်ထဲ ဆန္ဒခြေလှမ်းပေါင်းများစွာနဲ့ ဦးတည်ချက် ပြတင်းပေါက်ြ့ကည့်မိသတဲ့လား အာရုဏ်ဦး ပြပြမြင်ဆဲရယ် ရင်ဘတ်အတွေး လက်သီးဆုပ်များတွေက ရုပ်သေးပြတိုက်ထဲမှာ သွေးကြောတွေ တင်းနေဆဲနဲ့ ငါတို့ရဲ့  တိုက်ပွဲများ မနက်ဖန်အတွက်လေ ။။အရိုးများ တောင်လိုပုံမိရင်ဖြင့်အောက်ဆုံးအရိုး ဖြစ်ရစေ့မယ်တရွေ့ ရွေ့  စိတ်ခြေလှမ်းတွေနဲ့အလံမလှဲ တိုက်ရဲသူတွေမို့နာကျဉ်းခြင်း လောကတဖက်မှာရဲရင့်ခြင်း မုဒ်ဦးဆီသို့ရင်တွင်းထဲ သွေးသံရဲရဲနဲ့ငါတို့ရဲ့ တိုက်ပွဲများ မနက်ဖန် အတွက်လေ ။။ ၀ိဥာဉ်တွေက ငိုကြွေးသံ မကြားပါလား ရှုံးနိမ့်ခြင်း သင်္ကေတမှ မရှိတာ အိမ်မက်ဆိုးည အကြိမ်ပေါင်းများစွာနဲ့ အဲဒီကမ္ဘာမှာ ပုံရိပ်မဲ့ ရွှေနန်းတော်ဆီ ပျော်တော်ဆက် သီချင်းတွေဆိုရင်း ကဗျာလွတ် အကတွေကလို့ သောကက ခဏခဏ၀င်ဆဲ သော်ကပန်းက လှလှပပပွင့်လို့ နမ်းမိတိုင်း သွေးရနံ့များ ပါနေသလားတဲ့ လက်တွေကို မြှောက်ထား ရဲရဲပေါ့ ငါတို့ရဲ့ တိုက်ပွဲများ မနက်ဖန် အတွက်လေ ။။အကြိမ်တရာ မကစိမ်ခေါ်ကာ ပြထားလိုက်ကြဟေ့ဘ၀ရဲ့ သရဖူတွေကိုဆောင်းပေးမဲ့ ပြတိုက်မှာမီးထွန်းကာ ပူဇေါ်ဖို့လက်များကို ဆက်ထားလိုက်ကြအတွေးများကို ပေးဆပ်လိုက်ကြအနာဂါတ်က လက်ယပ်ပြတဲ့ အခါငါတို့ရဲ့  တိုက်ပွဲများ မနက်ဖန်အတွက်သွေးတစက်လောက် ဖေါက်ကြစို့။။။။။။။။။။။။။။။။။။။ ခိုင်အောင်ကျော် ( စစ်တွေ )